Raha toa moa ka … tapitra
Thursday, February 3, 2011 | 2 comments comments
Fa tamin’ilay faintin’ny fiovana iny an, dia nanambara aho hoe misy vaovao ratsy anankiroa, saingy ny iray ihany no voalaza tao dia ny amin’ilay hoe rediredy ilay resaka fiovana teo amin’ny asa ataoko.
Anisan’ny fiovana mba azo lazaina ho toa tsaratsara ihany teto Madagasikara ny momba ny halakin’ny tosa-pifandraisana amin’ny internet. Ry zalahy faly amin’ny Moov toa milaza afa-po ihany, izaho mampiasa blueline 4G koa dia mahita fa mba rapide kosa ity tantara ity. Ny halafony aloha mbola tsy horesahina fa rehefa mba mahita 56 ko/s kosa ny download ary eo amin’ny 14 ko/s ny upload; ary mba constant amin’izay ilay raha, tsy efa tsara lavitra noho ny teo aloha kosa ary ve? Nisy fotoana anefa aho nitaraina ihany hoe be sakantsakana sy fikafika ity blueline ity. Nisy fotoana tokoa aho naniry haka zavatra amin’ny torrent, fa tsy mety mandeha ilay izy. Dia tena nihaiky an’i Blueline aho hoe mahay manao blocage ry zalahy. Tsy mety akana zavatra amin’ny rapidshare sy megaupload ireny ihany koa ny blueline noho izy adresse IP itambarana, izany hoe mety mpanjifa miisa 600 mizara adiresy IP iray, koa rehefa jeren’ny serveur an’ny rapidshare ireny hoe efa manao téléchargement io adiresy IP io dia tsy afaka manao téléchargement hafa intsony. Vokany, rehefa te hanandrana haka zavatra iray ianao, dia mamaly ilay serveur hoe andraso aloha ho vita ny téléchargement efa ataonao, kanefa io téléchargement atao io mpanjifa tsy fantatrao hoe iza na aiza no manao azy.
Ka atao inona ary haut débit raha toa ka … tsy azonao ampiasaina amin’ilay tianao hanaovana azy ilay connexion? Manginy fotsiny ny ompan-dry Google indraindray rehefa manao fikarohana iny ianao dia lazainy hoe sao dia robot hono fa toa mandefa requêtes be dia be… Kay rehefa nodinihina ilay olana tamin’ny torrent, tsy i Blueline no manakana fa ilay resaka adresse IP itambarana no nampisy olana. Nisy mpanjifa mizara adiresy IP amiko nanao téléchargement ihany koa tao amin’ilay serveur tracker an’ilay torrent dia tsy tian’ilay serveur koa hoe comptes maromaro miaraka mampiasa azy avy amin’ny adiresy IP iray amin’ny fotoana iray.
Mba faniriako ihany koa izany hoe mba ho accessible avy any ivelany ny machine-ko. Indraindray mantsy aho any am-pandehanana any, mba maniry ny hampiasa ny machine-ko ato an-trano amin’ny alàlan’ny VNC ohatra, dia tsy mety satria ilay adiresy IP publique iny itambarana amin’ny bodo sy adala, dia mihantona ao amin’ny proxy an’i Blueline fa tsy mety tonga aty amin’ny port an’ny machine-ko.
Voatonona ho amin’ny fiandohan’ity volana febroary ity ny fahataperan’ny adiresy IP vaovao afaka zaraina amin’ny machine vaovao. Io ilay atao hoe IPv4 exhaustion. Izany hoe eo anivon’ny IANA, izay foibe mizara ilay adiresy dia voalaza fa ny alakamisy 3 febroary 2011 no hizarany ny ampahany farany ananany amin’ireo bolongana adiresy. Tokony hisolo ny IPv4 ny IPv6, izay tsy lany holaniana raha ny isan’ny adiresy azo hozarainao ao, saingy mbola vitsy dia vitsy ny mpikirakira ny internet no efa vonona amin’io fiovàna io.
Tsss, ilay IPv4 koa anie izany mitovy amin-dry Ratsiraka sy Ben Ali sy ry Moubarak sy ny filoha Afrikanina e! Firy taona izy nanjaka tokana teo, izao efa mba irina hoe TAPITRA ny tantarany nefa dia midongy seza be.
Tena mba faniriako anefa ny hoe tsy misy resaka IP partagé izany intsony rehefa tapitra ny tantaran’ny IPv4 fa tonga dia samy mahazo IPv6 fixe tsirairay avy ny mpanjifan’ny FAI.